Daredevil ရာသီ ၃ ရက်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ကိုကြော်ငြာတိုနောက်တွဲအသစ်တွင်တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည် - Netflix မူရင်း
Daredevil ရာသီ ၃ ရက်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ကိုကြော်ငြာတိုနောက်တွဲအသစ်တွင်တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
ဘယျအခြိနျမှာ Netflix လွှတ်ပေးရန်ရှိုးမ
Credit: Daredevil - ပက်ထရစ်ဟာဘရွန် - Netflix
Jane The Virgin: Gina Rodriguez သည် Instagram post မှချစ်ခြင်းမေတ္တာတြိဂံကိုအတည်ပြုသည် Daredevil ရာသီ ၃ တွင်သော့ချက်အနုပညာသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ အမှောင်ကိုမကြောက်ပါနှင့်
Netflix က Daredevil ရာသီ ၃ ရက်ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်ဖြစ်သည်။
Daredevil ရာသီ3ပြပွဲရဲ့တရားဝင်တွစ်တာအကောင့်မှတဆင့်မျှဝေအသစ်တစ်ခုကိုတိုယိုတာနောက်တွဲယာဉ်နှင့်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲကြေညာချက်သည်နှင့်အညီ, အောက်တိုဘာ 19, သောကြာနေ့အပေါ် premieres ။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Netflix ကတတိယရာသီအတွက်အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်ကိုဖြန့်ချိသည့်နေ့ရက်ကိုတွစ်တာတွင်မတော်တဆတင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းကိုမီဒီယာများစွာမှအလျင်အမြန်ကောက်ယူခဲ့သည်။ Netflix ကအောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်အထိလွှတ်ပေးမည်ကိုယခုအထိအတည်မပြုရသေးပါ။
တရားဟောရာ ၃၀:၁၅ ။ pic.twitter.com/I79ewdjfQe
- Daredevil (@Daredevil) စက်တင်ဘာ 20, 2018
voiceover နှင့်အတူရိုက်နှက်တက်, Matt Murdock ၏ကလစ်များပြသသောတိုယိုတာနောက်တွဲယာဉ်ထဲမှာ, Matt အမှန်တကယ်တစ်ချိန်ကနှင့်အလုံးစုံတို့အဘို့ဒုစရိုက်ကိုအနိုင်ယူဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းရှိပါတယ်ကပြောပါတယ်။ ပြီးတော့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်မင်းကိုမာရ်နတ်ကိုထုတ်ပစ်ရမယ်။
အတွက်အဆောက်အ ဦး များကသင်္ဂြိုဟ်တဲ့ပြီးနောက် ကာကွယ်သူများ, ဘဝနှင့်ကမ္ဘာကြီးအပေါ် Matt ရဲ့အလားအလာမဲမှောင်ဘက်သို့ပြောင်းလဲကြဟန်ရှိသည်။ ရာသီသစ်မှာ Matt အတွက်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာငါတို့မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူရဲကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့သူ့လက်ထဲကိုတရားမျှတမှုကိုယူဆောင်လာခြင်းကိုဆိုလိုတာကိုသူလက်ခံလိမ့်မယ်။ ဟိုအရင်တုန်းက။
ဒါမကြာမီပြီးနောက်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲနှင့်အတူ သံလက်သီး ရာသီ 2, Netflix နှင့် Marvel အနာဂတ်သို့ကြီးမားသောတွန်းအားပေးနေကြသည်။ Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist နှင့် Luke Cage တို့၏ရာသီ3ရာသီကုန်ဆုံးချိန်တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။ Daredevil ။ ဒါကအနာဂတ်ကိုဆီကို ဦး တည်သွားလိမ့်မယ်။
Netflix ၏မူရင်းများအတွက်အောက်တိုဘာလသည်မယုံနိုင်စရာလဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာ ၅ ရက်မှစ၍ Netflix ကထုတ်ပြန်သည် ပါးစပ်ကြီး အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ရာသီ2Hill House ၏သရဲခြောက်တဲ့ တစ်ပတ်အကြာအောက်တိုဘာ 12 ရက်နေ့တွင်သိသာထင်ရှားတဲ့, Daredevil ရာသီ ၃ ရက်အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နှင့်တစ်ပတ်အကြာတွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ Sabrina ၏ Chilling Adventures, ခေါင်မိုးကိုမှုတ်လိုက်သောပြပွဲသည်အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်တွင်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲမတိုင်မီတွင်ဖြစ်သည်။ တစ်လပဲ!
ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းပိုမိုသိစေပါလိမ့်မယ် Daredevil ရာသီ3အဖြစ်မကြာမီကျွန်တော်ထွက်ရှာတွေ့အဖြစ်! ပိုပြီးပိုစူးစမ်းရှာဖွေသူများ, နောက်တွဲယာဉ်များနှင့်အထူးနှုန်းများအတွက်ညှိနေပါ။
ပင့်ကူ-ကျမ်းပိုဒ် Netflix သို့
ဗဟို၏အလိုတော်ရာသီ 11 Hulu အပေါ်ဖြစ်သည့်အခါ
မကောင်းတဲ့ Santa Amazon ချုပ်အပေါ်ဖြစ်ပါသည်